စတိုင်လ်မိတဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာပဲ ရှိတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် (၇) ခု
စကတ်တွေ့ပြီး တွဲဝတ်ရမယ့်အကျႌကို ရှာမရလို့ တွေ့ရာကောက်ဝတ်လိုက်ရတာမျိုး အဖြစ်မခံဘူး။
ကိုယ်လည်း အဝတ်အစားကောင်းကောင်းဝယ်တာပဲ။ သေသေချာချာ ရွေးပြီးဝတ်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဟိုတစ်ယောက်လို မလှဘူး။ ဟိုတစ်ယောက်ကျပြန်တော့လည်း ဈေးမကြီးတာတွေ ဝတ်တာတောင်မှ လှနေပြန်ရော။ ကိုယ်များ ဘာတွေမှားနေလို့ ဖက်ရှင်မကျရတာလဲဆိုတာ မကြာခဏတွေးမိနေလား။ အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်စားတတ်သူတွေရဲ့ အကျင့်တွေ ကိုယ့်ဆီမှာ မရှိလို့ပါပဲ။ ဒါလေးတွေကို အတုယူပါနော်။
၁။ အဝတ်အစားတွေ သေချာသိမ်းတယ်
လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အဆင်သင့်ဝတ်နိုင်အောင်လို့ အဝတ်အစားနဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို သေသေချာချာ သိမ်းထားတယ်။ စကတ်တွေ့ပြီး တွဲဝတ်ရမယ့်အကျႌကို ရှာမရလို့ တွေ့ရာကောက်ဝတ်လိုက်ရတာမျိုး အဖြစ်မခံဘူး။ အလုပ်ကိုဝတ်တဲ့ဝတ်စုံနဲ့ အပြင်ထွက်ရင်ဝတ်တဲ့ ဝတ်စုံကိုလည်း သပ်သပ်စီခွဲထားတယ်။
အပြင်မှာ နေက ခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေတယ်။ ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ လက်ရှည်နဲ့ ဘောင်းဘီရှည်တွေ ထူထူထဲထဲတွေ ဝတ်မိရင် ဂွမ်းပြီလေ။ အဝတ်အစား မရွေးခင် ရာသီဥတုကို အရင်ဆုံးကြည့်ပြီးမှ လိုက်ဖက်တာကိုရွေးတယ်။
ပွဲတက်စရာရှိတယ်ဆိုလည်း ဘာဝတ်ရမလည်းဆိုတာ ခေါင်းထဲမှာ ကြိုစဉ်းစားထားတယ်။ ဘီရိုကိုဖွင့်ပြီး ဘာဝတ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေရင်း အချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့။ အနားနီးမှ အဝတ်အစားရွေးတာက အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။
ရေချိုးချိန်ကနေ အားလုံးပြီးစီးသွားအောင်ထိ ပြင်ဆင်ချိန်က ဘယ်လောက်ကြာလဲ? နာရီဝက်လား၊ တစ်နာရီလား? ကိုယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကို သေသေချာချာပေးပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပြင်ဆင်တယ်။ ဥပမာ အိမ်ကနေ ၇ နာရီထွက်ရမယ်၊ ကိုယ့်ပြင်ဆင်ချိန်က ၁ နာရီကြာတယ်ဆို ၆ နာရီထိုးတည်းက စပြီး ပြင်ဆင်နေပြီ။
ဖက်ရှင်ကျကျ ပြင်ဆင်သူတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ခေါင်းအစခြေအဆုံး ဈေးကြီးတဲ့ Brand တွေကိုချည်း ဝတ်ဆင်ထားတာ မရှိပါဘူး။ ဈေးကြီးတာနဲ့ ဈေးမကြီးတာကို ပေါင်းစပ်ဆင်မြန်းတတ်ကြပါတယ်။
ကျပ်လွန်း၊ ချောင်လွန်းတာတွေ မဝတ်ကြဘူး။ ဒီဇိုင်းကိုက ခပ်ပွပွဝတ်ရတာမို့လို့ အပွဝတ်တာမျိုးပဲရှိတယ်။ ကိုယ်နဲ့မတော်တာကိုဝတ်ပြီး ရှိုးပဲ့ခံမယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူး။
လူတွေက အပေါ်ယံအဝတ်အစားကိုပဲ ဂရုစိုက်ကြပေမဲ့ အတွင်းခံကိုတော့ ဖြစ်သလိုရွေးတတ်ကြတယ်။ အတွင်းခံကောင်းကောင်းဝတ်မှ ကိုယ်ခန္ဓာအလှအပ ပိုပြီးပေါ်လွင်မှာနော်။ ဘရာတွေဆိုလည်း လျော့တိလျော့ရဲဖြစ်နေတာမျိုး၊ ကြိုးချောင်နေတာမျိုးတွေ မဝတ်ကြပါဘူး။